Transition Politics-Kadiro Elemo is live now. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosTransition Politics-Kadiro Elemo is live now.
#IBSA_JAAL_MAROON WAA’EE AWO-WBO IlAALCHISE VOAF KENNE KEESSAA QABXII TOKKO TOKKO
QBO oolchuuf WBOn Oromiyaa keessa socho’u,uummata balla’a oromoo fi beektota keenya alaa fi keessa jiran waliin marii yeroo dheera,gadifagoo fi ball’aa erga goone booda murtii kana fudhachuuf dirqamneerra. Kun kan ta’eef aggaammii diinaa ofbaraaruuf akkasums uummata keenya roorroo bara 150 jalaa baasuuf akkasumas kaayyoo gootota ganamaa galma geessisuuf lubbuu keenya qaalii kenninee bosona jirru maqaa nagaa buusuu jedhuun gatii kaffaluu hinmallee kaffalaa jiraachuun keenya diina biratti akka goweummaatti waan fudhatameefidha.
Mootummaan EPRDF umriisaa keessatti nagaa fi afaan diploomaasii hinbeekne dheekkamsa fi gaaffii uummata keenyaa qabaneessuuf achiimmoo laamshessuuf ta’e jedhee miila isaatiin Asmaraa deemuun oggantoota fi waraana obbolaan keenya akka nagaaf bitamu fakkaate erga harka galfatee booda waan waada gale raawwachuun silaa haa afuuti WBO bosonatti afte cabsuu fi bittinsuun uummata keenya waanjoo fi gabrummaa waggaa dhibbaa biraa irratti fe’uuf bayyaannatee socho’e.
Dhimma kana obsaa fi tasgabbiidhaan uummata fi beektota keenya waliin mari’achaa fi dhihoo fagoo taanee ilaalaa turreerra. Dubbichi deemee deemee faanuma bara 1991 qbo diige sanarra nubuusuuf kan aggaamame ta’uu akkuma yaaddofnetti ta’ee argame. Ijibaata hedduu goone. WBOs,Uummata keenyas gatii guddaa fi ulfaataa nukaffalchiise,nukaffalchiisa jira. Kun immoo gonkuma fudhatama hinqabu!
Oggantootni keenya finfinnee jiran nuogganuu dhiisi ofiifuu booji’amoo waan ta’aniif isaaniinuu bilisoomsuu nugaafata. Ammaan achi oggantoota finfinnee mooraa diina keessa ta’anii wbo waliin quunnamtii qaban hinqqabnu. Kun kan ta’e of,uummata oromoo fi keessattimmoo qbo baraaruuf jecha murtii WBOn dhiibbaa uummata,beektotni fi diinni keenya nurratti godhaa jiruun kan fudhannedha.
Kanaafuu, uumnatni keenya murtii fudhattan kanatti cichoomuudhaan Mul’ata fi kaayyoo gootota ganamaan lafa taa’e sana akka fiixa baasnu!